Fanarahan-dia dahalo : Zandary telo namoy ny ainy -
AccueilSongandinaFanarahan-dia dahalo : Zandary telo namoy ny ainy
Fanarahan-dia dahalo : Zandary telo namoy ny ainy
07/12/2018 admintriatra Songandina 0
Raikitra indray ny fifandonana nandritry ny fanarahan-dia dahalo. Zandary no nanao hetsika fampandriana fahalemana, nifampitifitra tamin’ireo dahalo ampolony tany amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo, omaly tolakandro. Maty voatifitry ny dahalo tamin’izany ny zandary telo, izay iray kilasy ambony lietna avokoa.
Izany no vokatry ny fifandonan’ny dahalo sy ny zandary miasa ao amin’ny borigady nanao ny asa fitsidihana iny faritra iny, nandritry ny hetsika fampandriana fahalemana mialoha sy mandritra ny fifidianana. Araka ny loharanom-baovao voaray avy eo anivon’ny sampana seraseran’ny zandarimariam-pirenena, dia fanarahan-dia omby no nahatonga izao voina nihatra tamin’ny zandary amperin’asa miisa telo ireto. Dahalo ampolony nirongo basy sy zava-maranitra no naharaisana vaovao fa nandroba ka nangalatra omby teo amin’io tanàna voatondro io. Naharay fampandrenesana momba izany indrindra ireo zandary avy amin’ity borigady ity, ka tonga mivantana nanao ny fikarohana avy hatrany.
Nandositra namonjy niakandrefana ireo olon-dratsy ireo raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso, rehefa nahazo ny hazany, saingy niezaka nanaraka hatrany ireo fokonolona sy ny zandary. Tamin’ny alin’io fanafihana io no raikitra ny fifandonana. Rehefa nahatsikaritra fa nanara-dia azy ireo ny fokonolona tany an-toerana dia nanomboka nitifitra variraraka ireo dahalo. Voatery namaly tifitra noho izany ireto zandary niaro ireo mpiara-dia aminy, ka tratran’ny vela-pandrika. Vao nitodika kely izy nijery ny zava-misy, dia niharan’ny tifitra variraraka ka lavo avy hatrany. Nanohy ny lalana niaraka tamin’ireo omby halatra ireto dahalo rehefa nahita ireto farany fa niharam-boina, taorian’ny fifanjevoana. Na dia teo aza izany, tsy nijanona fa mbola raikitra ny fifampitifirana teo amin’ireo zandary sisa sy ireo dahalo. Taorian’izay vao afaka niantso namana izy ireo rehefa tsy sahy nanantona azy ireo intsony ireo jiolahy, ka tonga ireo zandary maromaro. Natao ny fizahana sy fikarohana ireo jiolahy, saingy mbola tsy tratra hatramin’izao ora hanoratanay izao. Efa misy ny fikaroham-baovao amin’ny fikarohana ireo razana ataon’ireo zandary tonga any an-toerana.
Famotsiam-bola : Amin’ny Whisky…
Tsy amin’ny alalan’ny fividianana trano be any ivelany na fanokafana orinasa sy tranombarotra fotsiny ihany no lalana hitan’ireo mpanao famotsiam-bola eto amintsika. Ohatra amin’izany ity famotsiam-bola mahatratra hatrany amin’ny 40 Miliara fmg ity… Karatra halatra ...Tohiny